Nika iwebhusayithi yakho uphicotho zincwadi zetrasti | Martech Zone
Amaxesha aliqela ngeveki ndenzeka kwiwebhusayithi yenkampani kuphela ukuba ndibuze ukuba ingaba bakwishishini ngokwenene, benza naliphi na ishishini, okanye bathembekile ngokwaneleyo ukuba bangazibandakanya nalo. Iinkampani zityala imali kubukho bewebhu kwaye aziqondi nokuba indawo abanayo inokuba sisalathiso sokungathembeki.
Ithemba yinto enkulu kuguquko. Kuya kufuneka uqale uzibuze, kumawakawaka abantu abatyelele iwebhusayithi yethu, kutheni bengaguquki nje? Ukuba ukuthembana ngumba, unokwenza utshintsho oluncinci kakhulu kuvelisa iziphumo ezintle.
Uphicotho zincwadi zetrasti:
UkuBhanisa Uphawu lwendawo yakho luya kuba nefuthe elikhulu ekubeni lithembekile na. Iinkampani ezininzi zixhomekeke kwilogo ezingaphuhliswanga kakuhle, imizobo engadibaniyo kunye nekopi ebhalwe kakubi. Ukuba uyilo lwakho lukhangeleka ngathi luzizigidi zeedola, luya kukhuthaza ukuthembela kwiindwendwe zakho. Ukuba yi-mashup yobugcisa beekliphu kunye nepeyinti yakho yakutshanje, ungalindeli lukhulu.
imihla -Ingaba unayo nayiphi na imihla kwiphepha lasekhaya kunye nezihloko eziqhelekileyo okanye iinyawo ezingekhoyo ngoku? I-A © 2009 luphawu oluqinisekileyo lokuba iwebhusayithi ayikhange ihlaziywe kwiminyaka embalwa, ishiya undwendwe lunamathandabuzo malunga nokuba ayisebenzi okanye ayisebenzi. Qiniseka ukuba yonke imihla edweliswe kumaphepha esiza sakho yakutshanje-izithuba zebhlog, ukuzibandakanya kokugqibela kwezentlalo, amaphephandaba akutshanje kunye nomhla wokushicilela!
Iifoto zesitokhwe - Ngelixa sisebenzisa iifoto zesitokhwe phantse kubo bonke abathengi, siyakuphepha ukusebenzisa iifoto zesitokhwe okanye izitayile zeefoto esizibona kwezinye iisayithi. Ukuba wonke umntu okwisiza sakho ikwangulo mntu uneenwele ezimhlophe oneentloko ezisentloko ezinazo ezinye iinkampani ezikushishino ezinazo kwindawo yazo, awunakuthathwa njengesixhobo esithembekileyo. Ukuba uyinkampani esemthethweni, kuyabiza kakhulu ukuba nefoto kwinkampani yakho apho unokudibanisa indawo yakho kunye nesitokhwe kunye neefoto zokwenyani.
Inombolo yomnxeba -Ukuba ndiza kwenza ishishini nomntu othile, ndifuna inombolo yakhe yefowuni. Xa ndifika kwiwebhusayithi engenayo, ndihlala ndisiya elandelayo. Nokuba uphendule umnxeba okanye awuyiphenduli, awungombuzo… ingaba ishishini lakho lidweliswe ngokusemthethweni njengeshishini linenombolo yalo yefowuni. Kwaye inani elirhafayo lingcono.
idilesi -Ukubonelela ngedilesi yeshishini elibonakalayo lenza ukuba abantu bakho bazi ukuba utyale imali kwishishini lakho kwaye unokufumaneka ngokulula. Iinkampani kunye nabantu ngabanye bayathandabuza ukwenza ushishino… ngakumbi kwi-Intanethi yonke… ukuba abazi ukuba le nkampani inendawo ebonakalayo kwenye indawo. Kwaye ibhokisi yeUPS ayiyinqumli, uxolo!
Iiprofayili -Uneefoto zokwenyani zabasebenzi bakho, amagama abo kunye noxanduva lwabo kwindawo yakho? Ukuba awuyenzi, izakubamba iindwendwe zakho kwaye abanakwenza shishini nawe kuba abayi kukuqonda. Ukubeka imifanekiso yeprofayile yokwenyani kubalulekile-ukubonelela ngobuso kwiprofayili yenkampani yakho.
Ukuzibandakanya entlalweni -Kunye nomfanekiso weprofayili yokwenyani, unonxibelelwano oluqhubekayo nabantu kwi-Twitter nakuFacebook. Ukuba nenethiwekhi yoluntu esebenzayo yindlela elungileyo yokuqinisekisa ukuba abantu bayabona ukuba ishishini lakho lithembekile. Ukuphendula kunye nomsebenzi wakutshanje kuthethathethwano lwakho kwezentlalo nakho kubalulekile.
Iipolisi -Imigaqo-nkqubo yoluntu okanye inkcazo ebhaliweyo yeenkqubo zokuhlawula, iindlela zokuhambisa kunye nokuthumela izinto zibeka isiseko esinika iindwendwe zakho ukuqonda okuqinisekileyo kweshishini lakho. Kungenxa yoko le nto ii-ecommerce sites zihlala zithumela imigaqo-nkqubo yokubuyisa kunye neendleko zokuhambisa ngaphambili. Kufuneka, nawe!
Izatifikethi kunye nobulungu - Ngaba ungowelinye iqela lesithathu, amaqela oshishino asemthethweni, ubambe naziphi na iziqinisekiso, uphicotho-zincwadi zomntu wesithathu, iimfuno zeinshurensi, njl. Ukubonelela abathengi bakho ngolwazi oluyimfuneko kwizatifikethi zomntu wesithathu kunye nokubeka iliso kuya kubenza bakhululeke. Iindawo ze-ecommerce zibeka izatifikethi ezivela kwimithombo enje UKUZithemba kwaye McAfee UKHUSELEKO.
Zeziphi ezinye iimpawu ezixeliweyo zokuba ungayithembi inkampani ngokubonakala kwe-Intanethi? Ungongeza ntoni kuphicotho-zincwadi lwakho lwentembeko?
tags: umcucubethembauphicotho zincwadiethembekile
Ukufunyanwa okuhlawulelweyo ngeeStumbleUpon Ads
Jan 7, 2013 kwi-9: 03 AM
Nje ukuba ndifunde ingxoxo malunga ne "© 2009" - ukuba oko kuthetha ukuba indawo ayihlaziywanga okanye ayitshintshi ngabom ukubonisa ukuba inkampani inekamva elidlulileyo. Kwakukho uninzi lwezimvo kodwa eyona ndiyithandayo yeyona ngu-2009-2012 umzekelo.
Kananjalo ndingathanda ukongeza kuluhlu lwe-imeyile esebenzayo kunye neleyo eyaneleyo Malunga nathi kwicandelo njengezinto ezibalulekileyo. Yonke le miqondiso inokujongeka ingabalulekanga okanye incinci kodwa kuvunyelwene noDouglas zizalathiso zokuba isiza sinokungathembeki. Kwabaqalayo njengam ngewebhusayithi yethu $ earch uxanduva lukhulu. Zininzi iinkcukacha zokumiliselwa ukufikelela kwinkangeleko ethembekileyo. Sikhethe ukubonisa inkampani yethu ubuso kunye nokubeka iifoto zethu. Ndonwabile xa ndibona le ndlela kwezinye iisayithi nayo.